भदौ ४ को सम्पूर्ण तयारी पुरा अध्यक्ष: डि.आर.एन. - Tulsipur Online
भदौ ४ को सम्पूर्ण तयारी पुरा अध्यक्ष: डि.आर.एन.
Posted by Admin | २ भाद्र २०७५, शनिबार १५:४० |
मोफसलमा चलचित्र पत्रकारले राम्रै चर्चा पाईरहेका बेला फेरि भदौ ४ गते संघले वार्सिक उत्सवको अवसरमा भव्य कार्यक्रम गर्दै छ । कार्यक्रमा अहिलेका सुपर स्टार नायक पल शाह लगाएतका कलाकार आउदै हुनुहुन्छ । कार्यक्रमकै सन्दर्भमारहि चलचित्र पत्रकार संघ दाङ शाखाका अध्यक्ष डि.आर.एन संग पत्रकार पूर्ण के.सी. मुस्कानले कुराकानी गरेका छन ।
भदौ ४ को तयारी पुरा भयो, अब के गर्न बाकी छ ?
चलचित्र पत्रकार संघ दाङले भदौ ४ गते ख्याती प्राप्त संगै वार्सिक उत्सव धुमधामका साथ मनाउने तयारी गरेको छ । सामान्य काम बाहेक तयारी पनि लगभग पुरा भएको छ । आज हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यक्रम पुरा भएको जानकारी गराउने छौ । कलाकार भदौ ३ गते आउने कुरा छ , हामीले ४ गते दिउसो १२ बजे उनिहरुलाई विष्णु हल तुलसीपुरको स्टेज चढाउने छौ ।
भदौ ४ मा के के हुन्छ ? सबैलाई चासो छ ?
कुनै विशेष पर्व जस्तै हुन्छ , भदौ ४ मा । किनभने चर्चित चर्चित कलाकार र विशिष्ट व्यतिmको जमघट हामी गराउदै छौ । सेडुल अनुसार औपचारिक कार्यक्रम बाट हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुनेछ । सम्मान कार्यक्रम पनि छ , मनोरञ्जननात्मक कार्यक्रम पनि हुनेछ । र हलमा कार्यक्रम सकेपछि अन्तरकृया कार्यक्रम पभन सोहि दिन भदौ ४ मा हुनेछ । तपाईले भने जस्तै हाम्रो कार्यक्रमको अहिले चौतर्फि चर्चा छ । हामी अत्यन्तै खुसि छौ ।
पल शाहलाई नै किन दाङ भित्रयाउदै हुनुहुन्छ । धेरै कलाकार थिए ?
पल शाह दाङको कलाकार हो , पलले अहिले सम्म कुनै पनि स्टेज कार्यक्रममा पुग्नुभएको छैन । चलचित्र पत्रकार संघले भदौ ४ मा तुलसीपुरमा विष्णु हलको स्टेज चढाउने छ । यो नयाँ गदैछौ ।
अनि गायक कृष्ण काफ्ले, सहिमा क्षेष्ठ , बरिष्ट रंग पत्रकार शान्ति पृय, सन्तोष क्षेष्ठ , लोकराज अधिकारी लगायत स्थानिय कलाकारलाई पनि समेट्ने छौ । दाङका कलाकारलाई सम्मान गर्ने , प्रोत्साहन गर्ने पनि हाम्रो उदेश्य हो । दाङलाई चलचित्र नगरि बनाउनु छ , त्यसैले पनि वार्सिक उत्सवमा हामीले यति ठुलो कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका हौ ।
खुल्ला मैदानमा पनि कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो फिल्म हलमा किन ?
अहिले कति बेला पानि पर्छ थाहा हुदैन , वर्खाको समय छ त्यसैले हलमा कार्यक्रम भयो भने ढुक्क हुने र दर्शकले पनिमजाले अवलोकन गर्ने भएकाले हल रोजियो । फेरि चलचित्र संग जोडिएको सस्था भएकाले पनि हलमै गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो ।
यो कार्यक्रमलाई दर्शकले कतिmको साथ देलान् त ?
कार्यक्रमको चर्चाको हिसावले हल प्याक हुन्छ । आजभोली फिल्म नचलिराको अवस्थामा हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ निस्चित रुपमा हल हाउसफुल हुन्छ । धेरैले अग्रिम टिकेट बुक गरिसक्नु भएको छ । कार्यक्रम सोचे भन्दा उत्कृष्ट र भव्य हुनेमा हामी ढुक्क छौ ।
पहिलो पटक चलरिचत्र पत्रकार संघले यस्तो कार्यक्रम गर्दै छ । सिकाई कस्तो भयो ?
चलचित्र पत्रकार संघले धेरै सेलेबृटि संग विभीन्न समयमा अन्तरकृया कार्यक्रम गरिरहन्छ । तर यो पटकको कार्यक्रम अलि फरक छ । त्यसैले पनि विभिन्न चुनौति आए र सिकाई पनि भयो । व्यवस्थापन , आर्थिक लगाएतधेरै पाटोमा सिक्ने अवसर पाईयो ।
भदौ ४ को लागी आम पाठकलाई के भन्नुहुन्छ ?
तपाई नेपाली चलचित्र पारखी लगायत प्रदेश टु डेमा यो अन्तरवार्ता पढ्ने जो कोहि भदौ ४ को कार्यक्रममा आउनुहोस् ,ख्याति प्राप्त कलाकार संग रमाउनुहोस । तुलसीपुरको विष्णहल , पार्क क्याफे लगायत तुलसीपुरका सबै सञ्चार माध्यमा टिकेट उपलब्ध छ । आजै टिकेट बुक गरि भदौ ४ मा आउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
Previousविद्यालय वदल्दै तन्नेरीहरु
Nextटिकारामलाई नेकपा दाङको अध्यक्ष बनाउन माग